UGAAR AH HAWEENKA: Afar Sifo Oo Lagu Garto Inaad Shukaansaneysid Nin Xaas Leh - Aayaha
Home/XIRIIRKA IYO GUURKA/UGAAR AH HAWEENKA: Afar Sifo Oo Lagu Garto Inaad Shukaansaneysid Nin Xaas Leh
Xaqiiqda ayaa waxa ay tahay in qaar kamid ah ragga aysan qarineyn inay xaasas leeyihiin iyagoo wali kuu sheegaya inay ku rabaan iyagoo xaasas leh balse waxaa jira malaayiin kaa qarinaya, sidaa darteed sided ku garaneysaa dadkaas si aad uga fogaatid inta aysan goori goor noqon.
Goorma ayuu kusoo wacaa?
Ninka xaaska leh ma hayo waqti uu kugu soo Waco goor hore oo habeenkii ah maxaa yeelay shaqada ayuu ka yimaaday oo guriga ayuu tagay markaasna waa inuu waqtiga la qaataa xaaskiisa, kuma soo wacaayo subixii shaqada darteed, balse wuxuu kusoo wici karaa waqtiga qadada.
Goorma ayaad isla soo damaashaadaan/waqti qaadasho?
Haddii aan guursaday, isla markaana aan rabo inaan shukaansi qarsoodi ah la yeesho qoftoo kale oo aan jeclahay, xageen u wadaa? Dhab ahaan uma wadaayo meel ay dadka nagu arki karaan inagoo isla joogna marka waxaan u wadaa meel ka fog dadka iyaqaana, waqtigana waa inuu noqdaa maalin caddeey.
Ma taqaanid gurigiisa
Ma shukaansataan rag, misana aadan garanayn hoygooda? Makaa codsadaa in isaga uu kuu yimaado, ama hotel makuu wadaa marar qaar? Miyaad garaneysaa sababta ay arrintaas u dhacayso? Sababta ayaa waxa ay tahay waa xaasle gurigiisana kuma geyn karo.
Ma garaneysid qof u dhow
Waan shukaansaday mana u arko mid wanaagsan in saaxiibadeey ay la kulmaan saaxiibteey.
Sababta ayaa waxa ay tahay waxaan rabaa inay la kulmaan qofta aan dhabta u jeclahay, micno weey iigu fadhisaa balse balse waxaan u baahanahay inaan gaarno heerkii aan saaxiibadeey iyo dadkeyga ugu soo bandhigi lahaay.
Marka haddii uusan ku barin qoyskiisa ama saaxiibadiis, waxaa iska cad iyo wax qarinayo.
Calaamadaha Lagu Garto In Saaxiibadaa Ay Ka Xunyihiin Xiriirkaaga/Guurkaaga
Qaababka Waalidiintaada Loogu Sheego Inaad Rabto Inaad Guursato